နံ့သာနီ (Indian Red Sandalwood) – MYANHOUSE
နံ့သာနီ (Indian Red Sandalwood)
“နံ့သာနီ” (Indian Red Sandalwood/ Pterocarpus Santalinus)
နံ့သာနီသည် ပိတောက်မျိုးနွယ်စုတွင် ပါဝင်၍ အပွင့်၊အသီး ခပ်ဆင်ဆင်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုက်များသည့် ရွေးကြီးနံ့သာနီ (Adenanthera Pavonina) မှာ ကုက္ကိုရွက်နှင့်ဆင်၍ အသီးမှာ ရွေးစေ့ကဲ့သို့ အနီရဲရဲ ဖြစ်သည်။
တန်ဖိုးကြီး သက်တမ်းရင့် နံ့သာနီမျိုး (Pterocarpus Santalinus) မျိုးရင်းကို အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း၊ ပါကစ္စတန်နှင့် နီပေါနိုင်ငံတို့တွင်တွေ့ရသည်။ အိန္ဒိယတွင် နံ့သာနီပင်ကို တင်းကျပ်သည့် ဥပဒေများဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။ နံ့သာနီစစ်စစ်သည် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးဖော်စပ်ရာတွင် မပါအဖြစ် ဆေးဘက်ဝင်အာနိသင်ရှိသည့်အပြင် အမွှေးနံ့သာအဖြစ်သာမက အသားအရည်အတွက် ထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်သည်။
မြန်မာအခေါ် နံ့သာဖြူ၊ နံ့သာနီဟု ခေါ်ကြသော်လည်း အပင်အုပ်စုမတူညီကြသည့် မျိုးကွဲအပင်မျိုးများဖြစ်ကြသည်။ ပိတောက်မျိုးနွယ်ဝင်အပင်ဖြစ်၍ မာကြောမှုမြင့်မားသောကြောင့် ရုပ်ထု ထုလုပ်ခြင်းနည်းပါးသော်လည်း အတုံးလိုက်ဆောင်ထားခြင်း၊ ပုတီးအဖြစ်ပြုလုပ်အသုံးပြုခြင်းများ ရှိကြသည်။
နံ့သာနီကို လာဘ်လာဘကောင်းစေသည့်အဆောင်၊ မကောင်းသောရန်အနှောင့်အယှက်များမှ အကာအကွယ်ပေးသည့်အဆောင်အဖြစ် ယုံကြည်၍ ဆောင်ထားလေ့ရှိကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့လည်ရှိ နန်းမြို့ရိုးအတွင်းမှ Supreme Harmony အမည်ရ နန်းဆောင်တစ်ခုထဲတွင် ‘ချင်’မင်းဆက်အသုံးပြုခဲ့သည့် နံ့သာနီသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ပလ္လင်တစ်ခုကို ယနေ့တိုင်ထိန်းသိမ်းပြသထားသည်။
Indian Red Sandalwood/ Pterocarpus Santalinus is the genus of Pterocarpus and has the similar shapes in flowers and seeds. The species mostly grow and found in Myanmar are Adenanthera Pavonina which is similar with rain tree and has bright red seeds.
The high valued and rare species, Pterocarpus Santalinus (Indian Red Sandalwood) is only found at the southern India, Pakistan and Nepal. In India, harvesting red sandalwood is strictly protected by country’s law. In Myanmar, Pterocarpus Santalinus is highly valued as one of the most important ingredients in the Myanmar traditional medical compounds, as the natural fragrance wood and as the special wood for skin health and beauty.
Though it is so called white and red sandalwoods in Myanmar, they are the wood species from the different family. Since red sandalwood is in the genus of Pterocarpus, it is very hard to be sculpted and people only use only as pure wood, powder and making beads.
And the red sandal wood is high demanded and famous for its magical power of bringing good luck, protecting from the dangers and the negative energies.
The Hall of Supreme Harmony in the ‘Forbidden City’ in the center of Beijing, features an exquisite throne made of red sandalwood and formerly used by the emperors of the Qing dynasty.
Author Kyaw LinnPosted on March 31, 2019 March 31, 2019 Categories Indian Red Sandalwood
Previous Previous post: နံ့သာဖြူ (Sandalwood)
Next Next post: ကြာသင်္ကန်း (Lotus Robe)